Penzura: chishandiso chekuratidzira muLinux | Linux Vakapindwa muropa
Penzura: chishandiso chekuratidzira muLinux
Pencil chishandiso chinonakidza kwazvo chaunogona kugadzira chako dhizaini. Uye zvakare, yakanangana nekupa yakapusa uye inonzwisisika interface yekugadzira mamodheru uye prototypes nekukurumidza. Ehe, iri muchinjika-chikuva software inowanikwa yeLinux, yemahara, yemahara uye yakavhurwa sosi.
Iyi purojekiti inokutendera iwe kuti uite kuwanda kwezvisikwa, kubva kuzviratidzo, kusvika kumamonoko, mhando dzewebhu peji, mawebhu webhu, emhando dzekushandisa desktop (GUI), machati ekuyerera, uye zvimwe zvakawanda. Naizvozvo, haisi chete chishandiso chevagadziri, inogona zvakare kuve inonakidza kune vanogadzira avo vanoda kuona kuti graphical interface yeimwe yemapurojekiti avo ingatarise sei.
Zvinosanganisira maturusi akasiyana siyana kugonesa kugadzirisa, uye kunyangwe muunganidzwa wakakura wemaumbirwo akafanorongedzerwa zvekuti iwe unongofanirwa kuaisa uye neakasiyana maumbirwo anowanzo kuvepo pane peji kana interface, uye kunyangwe kune nharembozha. Kana iwe usina yakakwana yeayo atouya, iwe unogona zvakare kurodha pasi mamwe uye wobva wawedzera iwo nyore. Iwe unowana zvakawanda zvekurodha pasi zvinhu zvekuisa, senge magadziriso eBootstrap-based mawebhusaiti, Zvinhu Dhizaini dhizaini mifananidzo yekugadzira Android app mapindiro, Twitter emojis, nezvimwe.
Zvese izvi Stencils uye Matemplate yaunogona kurodha pasi kuti uwane zvimwe zvekushandisa nazvo, unogona kuzviwana mahara zvachose kubva munzvimbo ino yekurodha pasi. Vanogona kuwanikwa zvakakwana vakazvimiririra uye vakaiswa sePenzura anowedzera.
Izvo hazviwanikwe mune zororo reiyo distros, asi unogona kuikanda Chemhondoro 64-bit Linux .deb package. Iwe zvakare uchawana .rpm mapakeji emamwe ma distros, pamwe neWindows uye macOS. Iyo kunyange ine yekuwedzera inowanikwa yeMozilla Firefox webhu bhurawuza. Yekupedzisira yakagadzika vhezheni yakaburitswa misi kubva ku2019, uye iri 3.1.0, kunyangwe iwe zvakare uine zvekare vhezheni pamaoko ako kana uchida ...
Mamwe ruzivo nezve Penzura - Yepamutemo Webhu
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Penzura: chishandiso chekuratidzira muLinux
WINE 6.11 inosvika nerutsigiro rwematimu muzvirongwa zvakavakirwa-mukati uye angangoita mazana matatu ekuchinja
Toshiba vaongorori vakagadzira huwandu hwehuwandu hwavanoti haugone kubira